Kulesi sihloko, sizonikeza imininingwane ngezindlela zokufunda zaseJalimane nezinye izindlela zokufunda isiJalimane. Yize ukuhlanganiswa kwesenzo, amagama amaningi kanye nobulili bohlelo lolimi kwesinye isikhathi kunselela abafundi bezilimi zakwamanye amazwe, empeleni akunzima kangako ukufunda isiJalimane.
Ukukwazi ukufunda ulimi ngokushesha kumayelana nokwenza ngcono ikhono lakho lokukhumbula. Kungazanywa izindlela ezahlukahlukene zokwenza isimo sibe mnandi ngenkathi ubamba ngekhanda ngasikhathi sinye ukwenza inqubo ibe lula.
Isisusa: Abanye ochwepheshe bagcizelela ukuthi ayikho into efana nokuthambekela kokufunda olunye ulimi, okuphambene nenkolelo evamile. Ubuchopho babo bonke abantu benzelwe ukuthi bafunde inani elikhulu lezilimi futhi kudingeka ugqozi kuphela kulokhu.
Ukuzwa: Imizwelo nesifiso kubalulekile ekufundeni isiJalimane kalula. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukufunda ngezwi okusekelwa yimizwelo kuhlala isikhathi eside kwimemori. Ukuzwa ngesikhathi sokufunda kubaluleke kakhulu kulokhu. Uma lokhu sikuchaza ngesibonelo, lapho umuntu engena esondweni le-ferris;
ngingu-höchsten (ophakeme kakhulu)
Singasho ukuthi amagama aphakeme (aphezulu) azofakwa kangcono enkumbulweni yomuntu ofunda lolu limi.
Ukuzulazula: Yize kungenzeki ukuya ezweni lapho wafunda khona lolu limi, ungakulucabanga. Ukuze uqinise umcabango wakho, ungahlela uhambo olubonakalayo ngokusebenzisa amandla we-intanethi. Isenzo sesenzo sokufunda "InErfahrungbringen" nokunquma isenzo sesenzo "Entschlussfassen" sizofundwa ngale ndlela ngendlela egqamile ngayo.
Umculo: Enye yezindlela ezizothinta isivinini sakho sokufunda isiJalimane ukulalela umculo. Ngenkathi ulalele iMozart, kuzoba lula kakhulu ukufunda izichasiso ezingafi, okusho ukuthi unsterblich futhi azikwazi ukuhlukaniswa, okungukuthi unzertrennlich.
Ukunyakaza: Emisebenzini ekugcina uhamba, njengokunyakaza okuguqa ngamadolo, uzohlala uphelelwa umoya. Lapho uzizwa ngokwengeziwe kuze kufike ezinhlakeni zezinwele, inhliziyo izodinga kakhulu ukumpompa igazi. Ukufunda amagama esiJalimane ngenkathi izitho zakho zikulesi simo kuzokunikeza izixazululo ezibambekayo. Kulokhu, ukwenza kungenye yezindlela zokufunda zaseJalimane ezisheshayo futhi eziphumelelayo.